Waqooyiga Kuuriya oo markii ugu horeysay hawada u diray Satelayt • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Waqooyiga Kuuriya oo markii ugu horeysay hawada u diray Satelayt
Waqooyiga Kuuriya oo markii ugu horeysay hawada u diray Satelayt
December 12, 2012 - By: Khalid Yusuf
Dowlada Waqooyiga Kuuriya ayaa markii ugu horeysay hawada sare u dirtay Satelayt (satellite) ayadoo arrintan ay cambaareeyeen wadamo badan oo jaar la ah wadankaasi.
Telefishinka dowlada Wadanka Waqooyiga Kuuriya ayaa shaaciyey in lagu guuleystay in hawada sare markii ugu horeysay uu gaaro Satelayt uu leeyahay wadankaasi, ayadoo gantaalkii siday Satelayt-ka lagu guuleystay in hawada loo diro, sida lagu yiri warbixinta telefishinka dowlada.
Arrintan ayaa waxaa si weyn u cambaareeyey wadamada Japan iyo Koonfurta Kuuriya oo uu dagaal ka dhaxeeyo wadanka Waqooyiga Kuuriya, ayagoo ku eedeeyey dalkaasi inuu sii wado tijaabinta Gantaalada ridada dheer ee qaadi kara hubka Nukliyerka, xili horey cunaqabteyn loo saaray wadankaasi.
Ciidamada Japan ayaa heegan sare ku jiray maalmihii lasoo dhaafay.
Kahor intaan gantaalkan cirka loo dirin ayaa waxaa heegan sare la geliyey ciidamada wadamada Japan iyo Koonfurta Kuuriya oo ayagu ka cabsi qabay in gantaalkaasi kusoo dhaco dhulkooda.
Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa lagu wadaa inuu fadhi aan caadi ahayn ka yeesho Gantaalka Waqooyiga Kuuriya oo ay hawada u dirtay.
Arrintan ayaa kusoo beegmaysa xili hal sano laga soo wareegay xiligii uu awooda dalkaasi Waqooyiga Kuuriya la wareegay hogaamiyaha cusub ee wadankaasi Kim Jong-un oo ka dhaxlay xukunka Aabihiis.
Kim Jong-un ayaa in dhawaale waday isbedalo uu ku sameenayey hogaanka iyo maamulka wadankaasi Waqooyiga kuuriya, asagoo dib u soo nooleeyey barnaamijyadii tijaabinta Gantaalada tiirada dheer, halka uu isbedalo ku sameeyey hogaanka militariga dalkaasi oo uu xilalkii ka wareejiyey Afartii Jeneraal ee ugu sareeyey ciidanka.
Tijaabinta Gantaalkan ama Satelaytka la sheegay in cirka loo diray ayaa guul siyaasadeed loo arki karaa xili uu hogaamiyaha wadankaasi Kim Jong-un uu muujinayo isbedalo uu awoodiisa ku xoojinayo.